ဒီအချက်တွေသင်ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သင်ဟာ တကယ်ရင့်ကျက်သူဖြစ်ပြီ! – Trend.com.mm
အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးလာတိုင်း တကယ်ရင့်ကျက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အသက်သာကြီးလာတယ် စိတ်က ကလေးဆန်နေတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်။တစ်ချို့ကတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့ စိတ်ကရင့်ကျက်ကြတယ်။ဒီလိုဆို တကယ်ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?ဒီအချက်လေးတွေသင့်မှာရှိနေလား ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားရတယ်။ကိုယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားရတယ်။ကိုယ့်စိတ်အခြေအနေဟာ ဘယ်အဆင့်ထိလဲစတာတွေကိုသေချာနားလည်ထားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုသေချာသိနေပြီလား?
တစ်ယောက်ယောက်ကိုအရမ်းကြီးချစ်မိသွားမှာစိုးလို့ထိန်းချုပ်ထားတာမျိုး၊စိတ်ကိုချုပ်တည်းထားတာမျိုးမရှိပဲ စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲထားတယ်။အကောင်းပဲလာလာ အဆိုးပဲလာလာ စိတ်ကအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်တယ်။အေးအေးဆေးဆေးပဲတုံ့ပြန်နိုင်တယ်။ခဏတာစိတ်ခံစားချက်လေးကို
လွှတ်မပေးလိုက်ပဲ ကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဖိအားမပေးဘူး။
ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်က ကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်သွားတာမျိုးအဖြစ်မခံတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့အပြုအမူတွေကို တော်ရုံမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ကိုယ့်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိခံစားချက်တွေကို အပြင်ကိုမဖော်ပြပဲ အချိန်ခဏလေးပေးပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်။ဘယ်အရာကိုစိတ်ကလက်ခံရမယ်။ဘယ်အရာကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတတ်လာတယ်။တစ်ခုခုဆို စိတ်လှုပ်ရှားဝုန်းဒိုင်းကြဲမယ့်အစား အဲ့ဒီခဏလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကို စောင့်ပြီးရင်ဆိုင်တတ်လာတယ်။
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာ၊ကိုယ်စိတ်ညစ်တာက ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။တစ်ခြားသူကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခြားသူကြောင့်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှာကိုစောင့်မနေတတ်တော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် တစ်ခြားတစ်ယောက်မှာတာဝန်မရှိဘူးလို့သိလာတဲ့အချိန်က သင်ရင့်ကျက်လာတာပါပဲ။
ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးဆေးဆေးဆုံးဖြတ်လာတတ်တယ်။စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်။စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာ အလိုလိုက်စရာမလိုပဲ သေချာကိုင်တွယ်နိုင်ရင်ရတယ်ဆိုတာသိလာတယ်။သွေးအေးအေးနဲ့ အရာရာကို လက်ခံတတ်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် စိတ်ကလည်းအလိုလိုအေးချမ်းလာပါတယ်။ဘ၀ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ဖြတ်သန်းတတ်လာတယ်။
သင်ရော စိတ်အေးချမ်းနေပြီလား?တစ်ခုခုကိုသွေးမပူပဲ အေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်တတ်နေပြီလား?ဒီအချက်တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ သင်ဟာရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
အသကျတဈနှဈပိုကွီးလာတိုငျး တကယျရငျ့ကကျြသှားတာမဟုတျပါဘူး။အသကျသာကွီးလာတယျ စိတျက ကလေးဆနျနတေဲ့သူတှရှေိပါသေးတယျ။တဈခြို့ကတော့အသကျငယျပမေဲ့ စိတျကရငျ့ကကျြကွတယျ။ဒီလိုဆို တကယျရငျ့ကကျြသူတဈယောကျဖွဈမှနျးဘယျလိုသိနိုငျမလဲ?ဒီအခကျြလေးတှသေငျ့မှာရှိနလေား ကွညျ့လိုကျပါ။
ကိုယျဘယျလိုခံစားရတယျ။ကိုယျဘာကွောငျ့ဒီလိုခံစားရတယျ။ကိုယျ့စိတျအခွအေနဟော ဘယျအဆငျ့ထိလဲစတာတှကေိုသခြောနားလညျထားပွီး ကိုယျ့စိတျကိုသခြောသိနပွေီလား?
တဈယောကျယောကျကိုအရမျးကွီးခဈြမိသှားမှာစိုးလို့ထိနျးခြုပျထားတာမြိုး၊စိတျကိုခြုပျတညျးထားတာမြိုးမရှိပဲ စိတျကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲထားတယျ။အကောငျးပဲလာလာ အဆိုးပဲလာလာ စိတျကအလှယျတကူလကျခံနိုငျတယျ။အေးအေးဆေးဆေးပဲတုံ့ပွနျနိုငျတယျ။ခဏတာစိတျခံစားခကျြလေးကို
လှတျမပေးလိုကျပဲ ကောငျးကောငျးထိနျးထားနိုငျတယျ။ကိုယျ့စိတျကိုယျ ဖိအားမပေးဘူး။
ကိုယျ့စိတျခံစားခကျြက ကိုယျ့ကိုပွနျထိနျးခြုပျသှားတာမြိုးအဖွဈမခံတော့ဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ စိတျကိုဖျောပွနတေဲ့အပွုအမူတှကေို တျောရုံမလုပျဖွဈတော့ဘူး။ကိုယျ့မှာဖွဈနတေဲ့လကျရှိခံစားခကျြတှကေို အပွငျကိုမဖျောပွပဲ အခြိနျခဏလေးပေးပွီး ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးရှိလာတယျ။ဘယျအရာကိုစိတျကလကျခံရမယျ။ဘယျအရာကိုဖယျထုတျရမယျဆိုတာ စဉျးစားတတျလာတယျ။တဈခုခုဆို စိတျလှုပျရှားဝုနျးဒိုငျးကွဲမယျ့အစား အဲ့ဒီခဏလေးပွီးသှားတဲ့အခြိနျကို စောငျ့ပွီးရငျဆိုငျတတျလာတယျ။
ကိုယျစိတျခမျြးသာတာ၊ကိုယျစိတျညဈတာက ကိုယျနဲ့ပဲဆိုငျပါတယျ။တဈခွားသူကွောငျ့မဟုတျပါဘူး။တဈခွားသူကွောငျ့ကိုယျစိတျခမျြးသာမှာကိုစောငျ့မနတေတျတော့ဘူး။ကိုယျစိတျခမျြးသာဖို့အတှကျ တဈခွားတဈယောကျမှာတာဝနျမရှိဘူးလို့သိလာတဲ့အခြိနျက သငျရငျ့ကကျြလာတာပါပဲ။
ဘယျလိုကိစ်စမြိုးပဲဖွဈဖွဈအေးအေးဆေးဆေးဆုံးဖွတျလာတတျတယျ။စဉျးစားတှေးချေါနိုငျစှမျးရှိလာတယျ။စိတျခံစားခကျြဆိုတာ အလိုလိုကျစရာမလိုပဲ သခြောကိုငျတှယျနိုငျရငျရတယျဆိုတာသိလာတယျ။သှေးအေးအေးနဲ့ အရာရာကို လကျခံတတျလာတယျ။အဲ့ဒါဆိုရငျ စိတျကလညျးအလိုလိုအေးခမျြးလာပါတယျ။ဘဝကိုပြျောပြျောရှငျရှငျပဲ ဖွတျသနျးတတျလာတယျ။
သငျရော စိတျအေးခမျြးနပွေီလား?တဈခုခုကိုသှေးမပူပဲ အေးအေးဆေးဆေးရငျဆိုငျတတျနပွေီလား?ဒီအခကျြတှပေါ ပိုငျဆိုငျထားရငျတော့ သငျဟာရငျ့ကကျြသူတဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။